Madaxweyne Lafta-Gareen oo maanta Golahiisa Wasiirada horgaynaya Baarlamaanka KGS – Kalfadhi
Madaxweyne Lafta-Gareen oo maanta Golahiisa Wasiirada horgaynaya Baarlamaanka KGS
February 27, 2019 February 27, 2019 Kalfadhi
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed ayaa lagu wadaa in maanta Golahiisa Wasiirada uu horgeeyo Baarlamaanka KG si codka kalsoonida loo siiyo Xukuumadda.
Baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa maanta yeelanaya kulankii 2aad ee Kalfadhiga 7aad oo maalin ka hor furmay sida ay sheegeyn Xubno katirsan Golaha Wakiilada KG waxa uuna ajandaha uu yahay Ansixinta Golaha Wasiirada maamulkaasi.
Madaxweyne Lafta-Gareen ayaa dhowaan soo dhisay Golahiisa Wasiirada oo ka kooban 50 Xubnood oo kala ah 25 Wasiir iyo 25 Wasiir ku xigeen waxaana laga sugayaa in ay wajahaan caqabadaha horyaala KG markii ay helaan kalsoonida Baarlamaanka.
Xildhibaan Mahad Cabdi Dhoorre oo katirsan Golaha Wakiilada Koonfur Galbeed ayaa Kalfadhi u sheegay in maanta Baarlamaanka la horgeyn doono Wasiirada markii ay helaan codka Baarlamaankana wax badan looga fadhiyo. “Madaxweynaha waxaa horyaala shaqooyin adag oo ay ugu horreyso ammaanka waxaana oga fadhinaa in wax laga qabto amni darrada KG ka jirta” ayuu yiri Xildhibaan Mahad Dhoorre oo waramay Kalfadhi.
“Lama mari karo waddada Muqdisho iyo Afgooye isku xirta, maalin ka hor Haween iyo dad kale ayaa lagu dhameeyay, Xukuumadda waxaan ka rabnaa warbixin falkii dhacay iyo wax ka qabasho deg dega ah” ayuu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Mahad Cabdi Dhoorre oo katirsan Golaha Wakiilada Koonfur Galbeed.
Cabdicasiis Xasan Maxamed Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa hore u ballan qaaday in uu waxbadan ka qaban doono amni darrada wadda ka baxda Muqdisho ee gasha magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobalka Baay.
Dhinaca kale waxaa jira dhaq-dhaqaaqyo Ciidan oo Gobalka Bakool meelo ka mid ah ka bilaawday oo la sheegay in lagu furi doono waddooyinka go’doonsan ee Gobolka Bakool oo inkabadan 6 sano u xiran Al-shabaab.
Xildhibaan Geelle “Waxaan ka hortagnay shir ka dhan ah MD Xaaf oo ka furmay Caabud-waaq”